Mkpụrụ Obi Oge »Sugarlove®
Ugbu a anyị hapụrụ gị n'aka “unhealthy symptoms” na:
Ọnyà gị n’oge gara aga
Na-ahapụ gị ka ị gbafuo, drained, ejighi n'aka na adịghị ike
Na-egbochi gị ịbanye na mmekọrịta nwere ike ugbu a
Kwụsị ịkwụsi ike ma nwaa onye gị na ya bi
You na ebili maka mgba maka ike inweta mkpụrụobi n'etiti gị na ụbọchị gị? Ọ bụrụgodi mgbe ụfọdụ ihe kachasị mma maka Mkpụrụ obi ọ bụla metụtara, nwere ike ibute njedebe nke Mkpụrụ Obi.
Sugarlove® bụ maka ịhụ mkpụrụ obi nke ọzọ n'anya na obi zuru oke. Ọ bụ Mmekọrịta Ime mmụọ. Nke a nwere ike isi ike ebe ọ bụ na ọ ga - adịrị gị mfe ịnọgidesi ike na ọrụ onye ọ bụla, na-amachi ebe ị nwere ntụsara ahụ ma rapaara ya n'ihi na ị na-atụ ụjọ ịmalitegharị uche gị.
N’uche n’echiche na echiche ebumnuche ọhụụ, ị dịla njikere ịmalite mkpakọrịta nwoke na nwaanyị site ugbu a gaa n’ihu Mkpịsị Mkpụrụ Obi.